Bit By Bit - Ukuqaphela ukuziphatha - 2.4.1 Counting izinto
Ukubala ngokweqa Simple kungaba ezithakazelisayo uma sihlanganise umbuzo obuhle idatha okuhle.
Yize kona ulele in oyinkimbinkimbi Ukushaywa ulimi, inkatho ucwaningo social ngempela nje uma ngibala izinto. In the age of idatha big, abacwaningi bangathembela kunanini ngaphambili, kodwa lokho akusho ukuthi ucwaningo kufanele kugxile Khuyini okuhlukileko kuneThemini yesi Izinto ezingasho. Kunalokho, uma sifuna ukwenza ucwaningo obuhle idatha big, kudingeka sicele: yiziphi izinto nibaluleke Khuyini okuhlukileko kuneThemini yesi? Lokhu kungase kubonakale udaba subjective ngokuphelele, kodwa zikhona ezinye amaphethini jikelele.
Ngokuvamile abafundi esekele ucwaningo lwabo counting ngokuthi: Ngizofika ukubala into akekho owake yabalwa ngaphambili. Ngokwesibonelo, umfundi angase athi, abantu abaningi baye bafunda ababaleki kanye nabantu abaningi abake batadisha amawele, kodwa akekho oye wafunda amawele ayizisebenzi. Motivation by ukungabikho akavamile eholela ekucwaningeni okuhle. Yiqiniso, kungase kube nezizathu ezinhle zokuthi ukutadisha amawele ayizisebenzi, kodwa iqiniso ukuthi baye watadisha hhayi ngaphambi akusho ukuthi kufanele zihlolwe manje. Akekho owake zathi isibalo sezincwadi imicu ekhaphethini ehhovisi lami, kodwa lokho akusho ngokuzenzakalelayo ziyabonisa futhi ukuthi lokhu kungaba kuhle wocwaningo. Motivation by ukungabikho kuba uhlobo like lathi: bheka, kukhona imbobo laphaya, futhi Ngiya basebenze kanzima ukuze aligcwalise. Kodwa akubona bonke hole kudingeka igcwaliswe.
Esikhundleni kukhuthaza by ukungabikho, ngicabanga ukuthi ekubaleni ngokweqa kuholela ucwaningo okuhle ezimweni ezimbili, lapho ucwaningo Kuyathakazelisa noma ezibalulekile (noma kuhle kokubili). Ngokwesibonelo, ekulinganiseni izinga lokusweleka kubalulekile ngoba olubonisa ukuthi umnotho ushayela izinqumo ngenqubomgomo. Ngokuvamile, abantu bayakwazi kuhle ngalokho okwakubaluleke. Ngakho, kulo lonke yalesi sigaba, Ngizofika ukunikeza izibonelo ezintathu lapho counting ithakazelisa. Esimweni ngasinye, abacwaningi base singabali ngobudlabha, kunalokho babebukeka kubala izilungiselelo ikakhulukazi kakhulu eveza nokuqonda okubaluleke ezilimini ezingaphezu imibono jikelele mayelana nendlela social izinhlelo umsebenzi. Ngamanye amazwi, a lot of yilokho okwenza le counting umzimba ethile ezithakazelisayo alikho idatha ngokwayo, kuvela lezi imibono more jikelele.
Ngezansi Mina ngizoba ukwethula izibonelo ezintathu: 1) ukuziphatha ukusebenza abashayeli bamatekisi eNew York (Isigaba 2.4.1.1), 2) ubungane kumiswa abafundi (Isigaba 2.4.1.2) kanye 3) social media ukucwaninga ukuziphatha uhulumeni waseChina (Isigaba 2.4.1.3). Yini esiyifundile ngokuhlolwa kwale izibonelo ukwabelana ngukutsi tonkhe letindlela zibonisa ukuthi uma ngibala idatha big ingasetshenziswa ukuze avivinye izibikezelo theory. Kwezinye izimo, big imithombo idatha wenze lokhu counting kuqhathaniswa ngqo (njengoba kwaba njalo endabeni ka-New York Amatekisi). Kwezinye izimo, abacwaningi kuyodingeka ukuba abhekane incompleteness by ukuhlanganisa idatha ndawonye futhi operationalizing kwaqanjwa theory (njengoba kwaba njalo endabeni ka ubungane kumiswa); futhi kwezinye izimo abacwaningi kuyodingeka ukuqoqa idatha zabo siqu elibukelayo (njengoba kwaba njalo endabeni ka ukucwaninga izici media social). Njengoba ngithemba lezi zibonelo zibonisa, ngoba abacwaningi abakwaziyo ukubuza imibuzo ethakazelisayo, idatha big kunesithembiso okukhulu.